Iindaba ezibalaseleyo zomculo zenyanga kaJuni | IBezzia
Iindaba ezibalaseleyo zomculo zenyanga kaJuni
UMaria vazquez | 03/06/2021 12:00 | Ukuhlaziywa ukuba 31/05/2021 19:49 | Iindaba
Umzi mveliso werekhodi awuthathi iholide ngoJuni njengoko uninzi lwethu luya kwenza. Inani elilungileyo lezinto ezintsha zomculo ziya kupapashwa kule nyanga apho sizibonele sikhetha ezo zezona zibalulekileyo kuthi. Bathandathu bebonke Iidiski zezitayile ezahlukileyo, ukuze okanye udikwe.
2 Inguqu yoThobhiya-Rostam
3 Izixhobo zekhompyutha - uBilly Gibbons
4 Unzima osuka entliziyweni-uJoana Serrat
5 Akukho thixo akukho zinkosi - Inkunkuma
6 IJordi - iMaroon 5
Imvumi kunye nomlingisi uNajwa Nimri uxhasa iingoma ezilishumi zakudala ezivela kwi Ingqokelela yemvakalelo yeLatin America Kwi-albhamu yakhe elandelayo, Ama, apho asebenzisana ngokukhethekileyo no-Israel Fernández, Rusowsky, Pablo Alborán no-Álvaro Morte.
Iveliswe kunye noJosh Tampico, Ama «ngu iprojekthi ezalwe ngokuthe ngqo ekuvalelweni«Utsho uNajwa Nimri. "Ukuvalelwa nokukhubazeka kobomi bobugcisa kwandinyanzela ukuba ndicinge kwaye ndijonge emva." Ngexesha lokumisa ngenkani, imvumi yavuka ngenye intsasa ngengoma entloko: "Cute Doll." Ingoma awayeyiculelwa ngunina njengesiqhulo kwaye wayehleli efihliwe kwikona yenkumbulo yakhe. Ezinye izinto ze-chorus ezilityelweyo ukusuka ebuntwaneni ziza ngaphezulu. Kancinci kancinci ufumanisa umsonto odibanisa ezi zihloko: eyakhe yohlobo oluthile, i-bolero yaseLatin American.
Yile ndlela i-Ama ivela ngayo, icwecwe eliza kukhutshwa ngomso kwaye namhlanje ungabona i- Ukuqala ujonge kwiFilmin. Namhlanje, iqonga laseSpain livula kuphela iMuñequita linda, kunye no-Ester Exposito njengomntu ophambili. Ividiyo ekhokelwa nguBàrbara Farré kwaye iveliswe yiCANADA.
I-Changephobia yi-solo yesibini ye-LP ngumqambi, umvelisi kunye no-Grammy ophumeleleyo u-Rostam Batmanglij. Ingqokelela yemixholo eli-11 yobuqu enzulu, kodwa ziyavakala kwindalo iphela kuye nakubani na okhe wathi ebomini bakhe wakha wafumana ukuthandabuza.
Ichazwe njenge "enye yezona zininzi abavelisi abakhulu be pop kunye ne-indie-rock Kwisizukulwana sakhe ”URostam uneengoma ezine ngoku ezikwi-albhamu onokuthi umamele ngomso ngokupheleleyo: Aba bantwana sasibazi, Bakuvula, 4Runner kwaye Ukusuka ngasemva kwikhabhathi.
Izixhobo zekhompyutha - uBilly Gibbons
I-Hardware yeyona albhamu yesithathu yi UBilly Gibbons, umphathi wangaphambili weZZ. Ishicilelwe kwi-Escape Studio kwaye iveliswe yiGibbons uqobo lwayo noMat Sorum kunye noMike Fiorentino, yenziwe ziingoma ezili-12 zoqobo kwaye zaqanjwa ngabathathu, ngaphandle kwe "Hey Baby, Que Paso", eyayibhalwe kuqala yiTornados yaseTexas.
Izinto ze ilitye eliqinileyo lendabuko, ilitye lelizwe, amaza amatsha kunye neblues zenza kube nzima ukuleyibhula lo msebenzi mtsha yiGibbons. Umsebenzi ophethe umkhondo wokugqibela, entlango ephezulu, ayisiyonto ngaphandle kwesigama esithethiweyo sikhatshwa yigitare enamandla evusa ilivo uGraham Parsons, osweleke kwiminyaka engama-48 eyadlulayo yenzeka kufutshane nalapho kwarekhodwa khona iHardware.
Unzima osuka entliziyweni-uJoana Serrat
I-Hardcore esuka entliziyweni, i-albhamu yesihlanu kaJoana Serrat iya kukhutshwa ngokulandelayo Nge-11 kaJuni phantsi kwelebheli ekhululekileyo, ilayisenisi ngokukodwa kwiGreat Canyon Records. Kurekhodwe kwiRedwood Studio eDenton, eTexas, apho wadibana khona nenjineli kunye nomvelisi uTed Young, inezingoma ezili-10.
Kwiinyanga ezidlulileyo uJoana Serrat ukhuphe njengomboniso wangaphambili "Imifanekiso", "Unam naphi na apho ndiya khona" kunye ne "Iidemon" zamva nje. Iphephancwadi elidumileyo laseBritane i-Uncut lilinganise i-albhamu kwi-9 kwabali-10, kubandakanya necandelo "lezityhilelo". Ngaba uyafuna ukuyiva?
Akukho thixo akukho zinkosi - Inkunkuma
Nge-11 kaJuni enye yezinto zethu ezingaqhelekanga zomculo ziya kubona kwakhona: Akukho thixo akukho zinkosi I-albhamu yesixhenxe yeqela lenkunkuma. Iveliswe nguNkunkuma kunye noBilly Bush, amathambo ale albhamu ayenziwe ngehlobo lowe-2018 entlango yePalm Springs, apho iquartet ichithe iiveki ezimbini iphucula, izama ukuziva iingoma.
UShirley Manson: “Le yingxelo yethu yesixhenxe, ethi amanani ayo achaphazele iDNA yomxholo wayo. Iimpawu ezintle ezisixhenxe, iintlungu ezisixhenxe kunye nezono ezisixhenxe eziyingozi. Kwakuyindlela yethu yokuzama ukuqonda ubudenge behlabathi kunye nesiphithiphithi esimangalisayo esazifumana sikuso. "
IJordi - iMaroon 5
El I-albhamu yesixhenxe yeMaroon yesi-5 iya kukhutshwa nge-11 kaJuni, eJordi. Isihloko apho iqela laseMelika elikhokelwa nguAdam Levine lihlawula imbeko kumphathi walo wokuqala, uJordani Feldstein, owasweleka ekupheleni kuka-2017 ngenxa yokubola kwemiphunga.
Iveliswe nguJ Kash, icwecwe izakuba neengoma ezili-14 Esesikuve kuyo iiNkumbulo, uthando lomntu kunye neempazamo ezintle ngoMegan Thee Stallion. Nangona kunjalo, ayizukuphela kokusebenzisana kwi-albhamu. Amagcisa afana no-Anuel AA, Tainy, Stevie Nicks, Juice WRLD noJason Derulo nabo bazakubakhona kumsebenzi wesixhenxe weemvumi.
Ngaba ulindele ukupapashwa kwale albhamu? Zeziphi kwezi ndaba zomculo ongathanda ukuziva?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » Iindaba ezibalaseleyo zomculo zenyanga kaJuni
Uyisusa njani ipolishi yesikhonkwane ezingubeni
Ulisusa njani igazi kwimpahla